Loolanka jagada Ra’iisal wasaaraha oo sii xoogaysatay & Madaxweyne Farmaajo oo kala dooranaya labo shakhsi
August 1, 2020 Mahad Jama 1
MUQDISHO(P-TIMES)- Iyadoo maalinta beri ah loo badinayo in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu magacaabo shakshigii noqon lahaa Ra’iisal wasaaraha dalka ayaa waxaa sii xoogaysanaya loolanka u dhaxeeya shakhsiyaad tartanka adag ugu jira jagadaasi.
Loolanka jagada labaad ee ugu saraysa dalka ayaa waxaa haatan isugu soo hadhay labo shakhsi, kuwaas oo kasoo kala jeeda deegaanada Galmudug iyo gobolka Banaadir.
Shakhsiyaadka haatan ugu saamaynta weyn ayaa kala ah Eng. Cabdullaahi Cali Xasan oo hore u soo noqday wasiirka Ganacsiga xukuumaddii dhacday ee Ra’iisal wasaare Xasan Cali Khayre iyo Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ah siyaasi hore u soo u noqday musharax madaxweyne 2017-kii.
Dr.Cabdulle oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Galmudug ayaa haysta dhalashada Maraykanka, waxaana uu xidhiidh wanaagsan kala dhaxeeya dowladda Maraykanka balse xilal kala duwan hore ugama qaban siyaasadda gudaha ee Soomaaliya hasa yeeshee waxaa abaabulkiisa jagada Ra’iisal wasaarenimo qayb ka ah qaar kamid ah qaraabada madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka dalka.
Eng. Cabdullaahi Cali Xasan oo hore u soo noqday wasiirka Ganacsiga xukuumaddii dhacday ee Ra’iisal wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kasoo shaqeeyey dhinaca bur burkii dalka hay’addaha horumarinta iyo gar gaarka, isagoona si gaar ah uga shaqeeyey arimaha dhanka waxbarashada oo lagu amaanay halka uu agaasime kasoo noqday urur ka shaqayn jiray dhanka waxbarashada iyo hormarinta loo yaqaanay CED.
Warar qaar ayaa sheegaya in keenistiisa xafiiska labaad ee ugu sareeya dalka ee Ra’iisal wasaaraha ay ka shaqaynayaan xubno ka tirsan Madashada Xibsiyada Qaran oo ay isku dhow yihiin wasiirkii hore ee Ganacsiga iyo Warshadaha Eng. Cabdullaahi Cali Xasan balse waxaa jagadaasi kula loolamaya Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo garab ka haysta xildhibaanada Baarlamaanka iyo dowladda Maraykanka maadaama uu xidhiidh dhow la leeyahay.
Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed ayaa hore ugu soo tartamay jagada madaxweynaha dalka Soomaaliya oo lagaga guulaystay, waxaana khudbad uu ka jeediyey labada Aqal ee Baarlamaanka dalka uu ku cadeeyey in uusan u adeegi doonin dowladdaha shisheeyo halka uu sheegay in uu yahay nin mayal adag oo bad baadada Soomaaliya u yimid dalka maadaama oo shaqooyinkiisii oo dhan uu faraha kasoo qaaday.
In hawiye siiba habargidir abgaal wax walba loola daba ordo ma xaq baa?.
Qabaailka kale maxaa u diiday jagadaas ? Ku xigeenka raisal wasaaraha maxaa loo dhaafi la’yahay si uu uso dhiso xukumad mataleysa mucarad & muxaafid
Subxanallah in hawiye & daarood uun isu bedelaan jagooyinka ugu sareeyo somaliya ma xalaal siiba AGL/ HGDR?